China Portable Tescar Agwọ CET RET RF na agụụ System emepụta na suppliers | MENOBeauty
Agwọ Tescar Portable CET RET RF na Vacuum System
2021 Igwe kacha mma kacha mma
448khz Tescar ọgwụ CET RET RF na agụụ
● Teknụzụ ：
CET ikike RF
RET Resistive RF na Agụụ
Oge 448KHZ RF
1) Na-akwalite mgbasa ọbara ma melite metabolism na ọgụ.
2) Dozie endocrine, mezie ụra, belata ike ọgwụgwụ.
3) Na-enyere aka ma gwọọ akụkụ dị iche iche nke anụ ahụ, dịka spondylosis cervical, lumbar spondylosis, ubu oyi, wdg.
4) Ihu ihu, na-eme ka akpụkpọ ahụ dịkwuo mma ma mee ka ihu ihu gị belata.
5) Mee ka ahụ dịkwuo mma, belata abụba visceral, na-eme ka ọ dị ntakịrị ma na-akpụzi.
6) Weghachi uche ise site na izu ike akwara na sel.
7) Na-enyere aka na mgbake n'oge nke nkwonkwo ligament, mgbu akwara, mmebi ahụ ike, na mmega ahụ
8) Gbanwee ihe mgbaàmà nke ahụ oyi, obere basal metabolism, aka na ụkwụ oyi, wdg
CET bụ okpomoku na-aga n'ihu na epidermis, na ikpo ọkụ ọkụ ọkụ bụ teknụzụ bụ isi iji hụ na akpụkpọ ahụ dị mma ma ghara imebi. Mgbe ahụ, a na-eji okpu ahụ emepụta ọkụ na-arụ ọrụ ọkụ, nke nwere ike iru akwa miri emi nke anụ ahụ ma kpalite ngagharị ngwangwa nke ion na ebubo ebubo colloidal na ahụ. Ma ọ bụ na-ama jijiji, Capricorn na-ewepụta okpomọkụ, n'otu oge ahụ, na-arụkwa ọrụ teknụzụ na-arụ ọrụ nke polar, na-eme ka anụ ahụ na-emepụta akpụkpọ anụ ahụ. Mgbe ike ọkụ nke anụ ahụ dị omimi na-eru 45 Celsius C-60 Celsius C, ọ na-emepụta mkpụmkpụ ozugbo, na-akpali nzuzo nke collagen ọhụrụ iji mejupụta oghere nke atrophic na collagen furu efu, ma mezigharị ma rụzigharịa ihe dị nro nke akpụkpọ ahụ. Mee elu mee ala firming nke anụ ahụ, na-ejuputa wrinkles, Iweghachi akpụkpọ ekwedo na-enwu.
RET ihe eji eme ihe ugboro ugboro bu ihe di oke ibu nke n’enye oru ike n’ime aru mmadu, na emeputa oku miri emi na akpukpo aru na akpukpo aru ma mebie abuba ahu, wee melata idilata. Mgbe oge dị elu dị elu na-eme ka ahụ mmadụ nwee ike, njupụta ịma jijiji dị obere, nke mere na ọ naghị esiri ike mepụta ion, ọ nweghịkwa mmeghachi omume nke electrochemical ma ọ bụ nrụrụ eletrik. Ọ bụrụ na ebutefe oge dị elu na ahụ mmadụ, anụ ahụ mmadụ ga-ekpo ọkụ. Nke a bụ n'ihi na mgbe etinyere ogo dị elu na ahụ mmadụ, oge ọ bụla nke ugbu a gbanwere ntụzi aka, ụmụ irighiri ihe mejupụtara anụ ahụ ga-ama jijiji, ha ga-etekwa ibe ha arụ iji megharịa ntụgharị, ntụgharị, na nkukpọ. Mkpụrụ ndụ molekụl a ga - eme ka ahụ mmadụ mepụta ọkụ.
● CNC n'afọ iri na ụma Technology
Site na CNC metrical pattern, nsogbu na-adịghị mma jikọtara ya na isi mmiri na-adịghị mma, dị ka ọnọdụ anụ ahụ kachasị elu, na-etinye omimi dị omimi nke ịhịa aka na ịhịa aka n'ahụ na epidermal nke anụ ahụ, akwara ọbara, abụba oyi akwa na onye nke usoro ụjọ ahụ. ọ nwere ike n'ụzọ dị irè melite ọmụmụ eruba n'etiti mkpụrụ ndụ mmadụ, dịkwuo ije nke mkpụrụ ndụ, rụọ ọrụ mkpụrụ ndụ, akwalite mgbasa nke ọbara na lymph mgbasa nke imperceptible ọbara-arịa, mee ngwangwa metabolism ma melite esịtidem gburugburu ebe obibi nke anụ ahụ.
Nke gara aga: Q0 ebughibu agụụ ala + Cavitaton + RF + Infrared Light
Osote: 11 ahịrị HIFU maka ihu & ahụ